China Plastic Wall Formwork ifektri nabaphakeli |I-Lianggong
I-Lianggong Plastic Wall Formwork iwuhlelo olusha lwezinto ezibonakalayo olwenziwe nge-ABS nengilazi yefayibha.Ihlinzeka ngezindawo zephrojekthi ngokumiswa okulula ngamaphaneli wesisindo esilula ngakho kulula kakhulu ukuwaphatha.Kuphinde konga izindleko zakho kakhulu uma uqhathanisa nezinye izinhlelo ze-formwork material.
I-plastic formwork iwuhlelo olusha lwe-formwork eyenziwe nge-ABS nengilazi yefayibha.Ihlinzeka ngezindawo zephrojekthi ngokumiswa okulula ngamaphaneli wesisindo esilula ngakho kulula kakhulu ukuwaphatha.
I-formwork yepulasitiki ngokusobala ithuthukisa ukwakheka kahle kwezindonga, amakholomu, nama-slabs kusetshenziswa inani elincane lezingxenye ezihlukene ze-formwork yesistimu.
Ngenxa yokuguquguquka okuphelele kwengxenye ngayinye yesistimu, ukuvuza kwamanzi noma ukhonkolo osanda kuthululwa kusuka ezingxenyeni ezahlukene kuyagwenywa.Ngaphezu kwalokho, iwuhlelo lokonga kakhulu umsebenzi ngoba akulula nje ukulifaka nokulifaka, kodwa futhi nesisindo esilula uma siqhathaniswa nezinye izinhlelo zeformwork.
Ezinye izinto zokwakha (njengezinkuni, insimbi, i-aluminium) zizoba nezinkinga ezihlukahlukene, ezingase zidlule izinzuzo zazo.Isibonelo, ukusetshenziswa kwezinkuni kubiza kakhulu futhi kunomthelela omkhulu emvelweni ngenxa yokugawulwa kwamahlathi.Kuphinde konga izindleko zakho kakhulu uma uqhathanisa nezinye izinhlelo ze-formwork material.
Ngaphandle kokubalulekile, abathuthukisi bethu bagxile ekuqinisekiseni ukuthi isistimu yefomula kulula ukuyiphatha nokuyiqonda kubasebenzisi.Ngisho nabasebenzisi abanolwazi oluncane lwezinhlelo ze-formwork bayakwazi ukusebenza nge-plastic formwork ngokuphumelelayo.
I-formwork yepulasitiki ingabuyekezwa kabusha, ngaphezu kokunciphisa isikhathi sokucubungula kanye nokuthuthukisa izinkomba zokusebenziseka kabusha, ibuye ihambisane nemvelo.
Ngaphezu kwalokho, isifanekiso sepulasitiki singagezwa kalula ngamanzi ngemva kokusetshenziswa.Uma iphuka ngenxa yokuphatha okungalungile, ingavalwa ngesibhamu somoya oshisayo esinomfutho ophansi.
Igama lemikhiqizo Plastic Wall formwork
Osayizi abajwayelekile Amaphaneli: 600 * 1800mm, 500 * 1800mm, 600 * 1200mm, 1200 * 1500mm, 550 * 600mm, 500 * 600mm, 25mm * 600mm nokunye.
Izesekeli Izibambo zokukhiya, induku yokubopha, amantongomane enduku yokubopha, i-waler eqinisiwe, i-prop elungisekayo, njll...
Amasevisi Singakunikeza uhlelo olufanele lwezindleko kanye nohlelo lwesakhiwo ngokomdwebo wakho wesakhiwo!
* Ukufakwa Okulula & Ukuhlanganisa Okulula.
* Ihlukaniswe kalula kukhonkolo, asikho isidingo sokukhululwa.
* Isisindo esilula futhi kuphephile ukusiphatha, ukuhlanza kulula futhi kuqine kakhulu.
* I-formwork yepulasitiki ingasetshenziswa kabusha futhi igaywe kabusha izikhathi ezingaphezu kwe-100.
* Ingathwala ingcindezi kakhonkolo entsha efika ku-60KN/sqm ngokuqiniswa okufanele
* Singakunikeza ukwesekwa kwenkonzo yobunjiniyela besayithi.
Okwedlule: H20 Timber Beam Ikholomu Formwork
Olandelayo: I-Ringlock scaffolding